Wafti dhakhaatiir ah oo uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka ee Puntland Dr. Cali C. Warsame oo ka soo degay Galkacyo. – Radio Daljir
Wafti dhakhaatiir ah oo uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka ee Puntland Dr. Cali C. Warsame oo ka soo degay Galkacyo.
Oktoobar 23, 2010 12:00 b 0
Galkacyo Oct, 23 ? Wafti ballaaran oo ka socday dawladda Turkiga ahna dhakhaatiir caafimaad iyo mas?uuliyiin ka socota dawladda Puntland, ayaa maanta si diirran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaraha ee magaalada Galkacyo.
Waftigaan oo uu hoggaaminayey wasiirka caafimaadka ee dawladda Dr. Cali C/llaahi Warsame, ayaa ka koobnaa 23 dhakhtar oo dhammaantood u dhashay waddanka Turkiga, isla markaana ah dhakhaatiir leh takhasuusyo kala duwan oo xagga caafimaadka ah.
Ujeedda socdaal waftigaan ayaa ku qotonta fulinta adeegyo caafimaad oo lacag la?aan ah, adeegyadaasi oo ay u qaban-doonaan bulshada ku nool deegaannada Puntland, waxaana dhawrkii toddobaad ee ugu danbeeyey la arkayey dad bukaan ah oo laga kala keenayo gobollada kala gaddisan ee Puntland si ay uga faa?idaystaan barista iyo daweynta caafimaad ee lacag la?aanta ah.
Khaatiirtaan ayaa gobolka ku sugnaan doona muddo shan cisho, waxaana ay ka hawlgali doonaan isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo, iyagoo fulin doona adeegyo caafimaad oo kala duwan, sida Kabka jabitaanka xubnaha, qalliinka kala duwan iyo daaweynta dhammaaan cudarrada guud ee dadka ku dhaca.
Waftigaan ayaa hadda ka hor socdaal ku yimid Puntland si ay u hubiyaan baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaannada Puntland, lana kulmay madaxda sar sare ee dawladda, waxaana ay tani jawaab u tahay ballan-qaado dhawr ah oo ay sameeyaan xilligii ay Puntland booqashada ku yimaadeen.
Boqolaal qof oo ka kala yimid meelo kala duwan, ayaa isku diiwaan-galisay barista iyo daweynta caafimaad ee dhakhaatiirtaasi ay sida lacag la?aanta ah u fulin doonan muddada shanta cisho ah ee ay joogayaan.
Imaanshaha dhakhaatiirtaan waxaa dawr weyn ka ciyaaray dawladda Puntland gaar ahaanna wasaaradda caafimaadka oo in muddo ah ku hawlanayd sidii kor loogu qaadi lahaa tayada caafimaad ee deegaannada Puntland.
Dr. Dhegacade oo ka qayb galay xaflad yabooh dhaqaale loogu ururiyey cisbitaalka Galkacyo Medical Centre (GMC) & kulliyada caafimaad ee PIHST oo lagu qabtay Minneapolis.
Bilayska Galkacyo oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah koox hubaysan oo rasaas ku furtay bar koontarool iyo gaarigii ay wateen.